Xukuumadda oo war kasoo saartay shirkii maanta ee Golaha Wadatashiga Qaran - Caasimada Online
Home Warar Xukuumadda oo war kasoo saartay shirkii maanta ee Golaha Wadatashiga Qaran
Xukuumadda oo war kasoo saartay shirkii maanta ee Golaha Wadatashiga Qaran
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa weli ka socda magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya shirka Golaha Wadatashiga Qaran ee u dhexeeyo ra’iisul wasaaraha, madax goboleedyada dalka iyo duqa magaalada Muqdisho, kaasi oo galay maalintii saddexaad oo xiriir ah.
Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimuu ayaa goordhoweyd ka warbixiyay Shirka Golaha Wadatashiga Qaran, asaga oo sheegay in madaxda ay maanta la kulmeen qeybo kamid ah bulshada rayidka ah iyo haweenka.
“Shirka labo qeyb ayuu ahaa gelinkii hore waxay madaxda Golaha Wadatashiga Qaran kulan la qaateen ururada bulshada rayidka oo ay ka dhageysteen talooyin la xiriira gaabis ka jira doorashooyinka iyo sida lagu sixi karo, markii ay kulamadaas dhameysteen waxa uu golaha u ballan-qaaday inay tixgelin doonaan soo jeedintooda,” ayuu yiri.
Sidoo kale waxa uu sheegay in madaxda Golaha Wadatashiga Qaranka ay ka wada-hadleen arrimaha amniga, doorashooyinka, oo si aad ah oo qoto dheer looga hadlay hufnaanteeda iyo jadwaladeynteeda.
“Madaxda markay dhageysteen qeybihii kala duwanaa ee bulshada, tallooyinkii ay soo aruuriyeen ayey si saraaxad leh u gorfeynayaan. Waxaana shirka ka muuqday is afgarad.”
Waxa uu intaas kusii daray in maalmaha soo socda lasoo gabagabeyn doono shirka, asaga oo Golaha uu mudeyn doono waqtiga la dhameynayo doorashooyinka dalka oo dhowr jeer uu dib u dhac ku yimid.
Madaxda Golaha Wadatashiga Qaranka ayaa intii uu socday shirkooda waxay kulamo kala duwan la qaateen qeybaha kala duwan ee bulshada, Beesha caalamka iyo Midowga Musharaxiinta, waxayna dhamaantood u gudbiyeen tallooyin ku aadan doorashada iyo hufnaanteeda, kuwaasi oo qaarkood sida muuqata laga gaaray is-afgarad.
Si kastaba, shirka u dhexeeyo ra’iisul wasaaraha, madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah oo aad loogu baahna, islamarkaana ay taagan tahay xiisad u dhexeyso madaxweynihii hore Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Roooble.